Kenya oo ku dhawaaqday inay taageero milatari siinayso dawladda Soomaaliya. – Radio Daljir
Nayrobi, Oct, 21 – Xukuumadda Kenya ayaa markii ugu horaysay qiratay inay taageero dhinac-walba ah siinayso dawladda Soomaaliya, isla markaana ay laba jibaarayso hawl-galkeeda ku aadan la dagaallanka kooxda Al-shabaab.
Emmanuel Chirchir oo ah afhayeenka ciidanka milatariga xukuumadda Kenya, ayaa shaaca ka qaaday inay ka go’antahay sidii ay dawladda Soomaaliya uga caawin lahaayeen hawl-galka soo afjarida kooxda Al-shabaab.
Mr. Chirchir afhayeenka milatariga Kenya ayaa iftiimiyay inay haystaan amar cad oo qeexaya, ka qayb-qaadashada dagaallada lagula jiro Al-shabaab, kaasi oo ay ka haystaan xukuumadda Kenya, sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Afhayeenka ciidanka milatariga dalka Kenya, ayaa sheegay in hawl-galada lagula dagaallamayo Al-shabaab aysan ku ekayn guddaha dalka Soomaaliya, balse ay jiraan hawl-galo ay ciidanka booliska dalka Kenya ay ka fulin doonaan magaalada Nayrobi ee xarunta dalka Kenya, gaar ahaan xaafada Islii oo dadka Soomaalida ah ay aad ugu badan-yihiin.
Xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inay ka go’antahay sidii ay u sugi lahayd ammniga guud ee dalkeeda, isla markaana ay qab-qabanayso cid kasta oo ay ku tuhunto inay xiriir la leedahay kooxda Al-shabaab, balse Al-shabaab ayaa dhankeeda ku han-jabtay inay qaadi doonto weeraro ka dhan ah, dalka Kenya, kuwaasoo ay ka fulin-doonto guddaha magaalada Nayroobi ee caasumadda dalkaasi.